Famerenana ny "police de la route" Hogiazana avokoa ireo fiara mibahan-dalana
Hiara-hiasa amin'ny kaominina ny mpitandro filaminana manao PR ho fametrahana fanagiazana fiara na "taquet d'arret"
sy hiara-hiasa amin'ny Tafika Malagasy koa amin'ny fiara "etsy babeko razandry" hitaomana ireo fiara rehetra mitoetoe-poana amoron-dalana sy mibahana fifamoivoizana. Araka ny fanambaran'ny kaomisera CDP Danny Marius Rakotozanany, Tale Jeneralin'ny Ministeran'ny Filaminam-bahoaka, nanomboka omaly 13 janoary ny famerenana ny asan'ny Police de la route na PR, teto Antananarivo Renivohitra. Ny taratasin-tsazy vita printy ofisialy dia hivoaka afaka 2 na 3 volana araka ny fifanarahana tamin'ny trano pirinty nasionaly. Namoaka "contravention" vonjimaika tsy azo anaovana hosoka aloha ny Ministera mpiahy ka 1 000 isan-kerinandro no natota avy amin'ny polisim-pirenena. Fanamiana mianavaka koa no entin'ireo manatanteraka PR mety miova araka ny vanimpotoana. Haverina tsy ho ela koa ny laharam-pinday fitarainana 117 ka ny mpiandraikitra araka ny toerana iantsonana no handray izany. Efa nisy ny fiomanana amin'ny PR, notsongaina manokana ireo Polisy fa tsy ny mpitandro filaminana amin'ny polisim-pirenena rehetra no ho PR. Nanomboka niainga omaly koa ireo mpampiofana amin'ny faritany izay hanofana ireo ho mpampiofana an'ireo any amin'ny faritra ary afaka tapabolana dia hiasa daholo ny PR any amin'ny faritra manerana ny Nosy Ny "barrage de sécurité, économique" dia miainga mivantana amin'ny manampahefana any ifotony. Hoy ny Tale Kabinetra, ny kaomisera CPP Albert Estel Ainanirina.Tsy hilefitra amin'ireo polisy manao kolikoly ny Ministera mpiahy.